သင့်ဆံပင်အရောင်ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - Hello Sayarwon
သင့်ဆံပင်အရောင်ကို မယ်လနင်လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးက ဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပြီး ဒီပစ္စည်းကို ဆံပင်အမြစ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မယ်လနိုဆိုက်ခေါ် ဆဲလ်လေးတွေက ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆံပင်အရောင်ဟာ အဲဒီလူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ လက်ခံယုံကြည်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ခရိုမိုဆုမ်းအမှတ် ၁၆မှာ သန္ဓေပြောင်းမျိုးဗီဇတစ်ခု ရှိနေတဲ့ အနီရောင်ဆံကေသာပိုင်ရှင်တွေဟာ အခြားသူတွေအမြင်မှာ အမြဲလိုလို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းနေတာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပတိုက်သားတွေဟာ အနီရောင်ဆံကေသာကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးကြသလို စကော့တလန်နဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ ဆံပင်အနီရောင်ရှိသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ အာရှဒေသ အချို့နေရာတွေမှာလည်း ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို အနီရောင်ကေသာပိုင်ရှင်တွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူကေနိုင်ငံမှာတော့ ဆံပင်အနီကို တန်ဖိုးထားစရာအဖြစ် မသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အနီရောင်ဆံပင်ကို ရမယ်ရှာပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရ၊ စနောက်ခံရတာမျိုးတွေ ကြုံကြရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ နှစ်ကာလတော်တော်ကြာတဲ့အထိ အနီရောင်ဆံပင်ကို မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ သင်္ကေတလို့ လူတွေက မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျာမနီရိုးရာပုံပြင်တွေမှာဆိုရင် ယုတ်မာတဲ့ စုန်းမကြီးတွေကို ဆံပင်နီနီ၊ မျက်လုံးစိမ်းစိမ်းနဲ့ မိန်းမကြီးတွေအဖြစ် ပုံဖော်လေ့ရှိတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်ဆံကေသာပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ယှဉ်တွဲနေတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စရိုက်လက္ခဏာတွေကတော့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခြင်း၊ အချစ်နှင့်ပတ်သက်လျှင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်ခြင်း၊ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်း၊ ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဒေါသကြီးခြင်း၊ ပေါက်ကွဲတတ်ခြင်း၊ စိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ခေါင်းမာခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှားပါးတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝရွှေရောင် ဆံကေသာပိုင်ရှင်တွေဟာ မြောက်ဥရောပနဲ့ အမေရိကမှာပဲရှိတယ်လို့ လူတွေက ယူဆထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်ပစိဖိတ်ဒေသက ဆော်လမွန်ကျွန်းစုတွေမှာ နေထိုင်သူလူဦးရေရဲ့ ၅ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း ရွှေရောင်ကေသာပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရွှေရောင်ဆံပင်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတပါးအာရုံစိုက်မှုကို အလွန်အမင်း လိုလားကြတယ်လို့ ထင်ကြေးပေးကြသလို အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမှုနှုန်းလည်း မြင့်မားတယ်လို့ စစ်တမ်းတစ်ခုက ဆိုထားပြန်ပါတယ်။
မိန်းမဆန်ခြင်း၊ ပျိုမြစ်ခြင်း၊ ပြောတိုင်းယုံတတ်ခြင်း၊ နာခံတတ်ခြင်းတို့ဟာ ရွှေရောင်ဆံပင်ရှိသူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ပုရိသတွေက ဆံပင်ရွှေရောင်မလေးတွေကို ပိုပြီးသဘောတွေ့ကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ အာရှ၊ တောင်အမေရိကနဲ့ အာဖရိကဒေသတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဆံပင်အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရင့်ရောင်ဆံကေသာဟာ အနီရောင်၊ ရွှေရောင်ကေသာတွေထက် ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုထားပါတယ်။ နိုဘယ်လ်ဆုရရှိသူ အတော်များများဟာလည်း အညိုရင့်ရောင်ကေသာပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ကြပြီး ဒါဟာ အကြောင်းမဲ့တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဆံပင်အညိုရင့်ရောင်ရှိသူတွေကို အလုပ်ကြိုးစားသူတွေအဖြစ် တွေ့ရလေ့ရှိပေမယ့် ကြိုးစားသလောက် အလွယ်တကူလက်လျော့တတ်သူတွေလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အခြားသူတွေထက် ပိုပြီးအလေးအနက်ထားတတ်ကြသလို တည်ငြိမ်မှုကို နှစ်ခြိုက်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရင့်ရောင်ကေသာရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ထိပ်ပြောင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများခြင်းနဲ့ နီကိုတင်းစွဲလမ်းနိုင်ချေများခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေရောင်ကေသာပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေ ပိုအကြိုက်တွေ့တတ်သလိုပဲ အနက်ရောင်ကေသာပိုင်ရှင် အမျိုးသားတွေဟာလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကို ပိုပြီးရယူနိုင်ကြတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက အနက်ရောင်ကို နက်နဲခြင်း၊ အတွေးနယ်ချဲ့ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်တတ်ခြင်း၊ အလေးအနက်ထားတတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ တွဲပြီးရှုမြင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဆံကေသာကို အနက်ရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ဒီအန်အေကုဒ်အစီအစဉ်ဟာ Non Hodgkins Lymphoma ဆိုတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေပါတယ်။ ဆံပင်အနက်ရောင်ရှိသူတွေဟာ ဘာသာရေး၊ ကဗျာလင်္ကာနဲ့ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတို့ကို စိတ်ပါဝင်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်ပေမယ့် မိမိကိုယ်ကိုယ် သံသယစိတ်ရှိသူတွေလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ထူးချွန်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ ကုထုံးပညာရှင်တွေဟာ သဘာ၀ အနက်ရောင်ကေသာပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Hair Color – What Does It Say About You? http://www.color-meanings.com/hair-color-what-does-it-say-about-you/. Accessed April 25, 2017